Nitarika fivoriana niarahan’ny governemanta sy ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny Fifidianana (CENI) ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany 09 septambra 2019 maraina, teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo. Fivoriana izay nijerena akaiky ny fizotry ny fanomanana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolotsain’ny tanàna, hotanterahina ny 27 novambra 2019 ho avy izao, mba hahafahana mahafantatra izay olana mety hiteraka tsy fahatomombanana, ary mitondra vahaolana mifandraika amin’izany.
Nanambara ny Praiminisitra fa hifarana ao anatin’ny telo andro ny fotoam-pametrahana ny antontan-taratasy firotsahana hofidiana ary mizotra ara-dalàna ny fikarakarana rehetra, izay azo lazaina fa milamina amin’ny ankapobeny, na eo amin’ny lafiny fikirakirana ny fitaovana izany, na eo amin’ny lafiny tetibola. Nojerena ihany koa ny andraikitry ny tetikasa “SACEM” izay nanohana tamin’ny fifidianana hatramin’izay, hoy ny Praiminisitra.
Fanirian’ireo maniry hirotsaka hofidiana Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina ny hisian’ny mpiandry raharaha eny amin’ny Tribonaly amin’ny fakana « casier judiciaire », toy ny eny amin’ny CED sy Ivon-ketra amin’ny fakana antontan-taratasy hamenoana ny firotsahan-kofidiana.
Toy ny amin’ny faritra maro dia mampitaraina ireo mpirotsaka ho fidiana ny fakana io « bulletin n°3 » eny amin’ny Fitsarana io, fa sady mandany fotoana no mampivezivezy, misy aza maka vola mihitsy.
lundi, 09 septembre 2019 15:42
Fantatrao ve: Ahoana no anohizana fianarana any France?
Maro isika no manontany hoe rehefa afaka Bac ka te hanohy fianarana any France, dia inona no fomba atao, inona ireo ilaina?
Toa an'ireo firenena maromaro, Etats-Unis, Japon, France, Allemagne, Corée du Sud, Chine, Inde... dia misy amin'izy ireo no manana programme hiarahana amin'ny fanjakana Malagasy, famatsiana bourse d'étude na famatsiam-bola fianarana, misy natokana ho an'ireo vao afaka Bac, misy kosa ho an'ireo izay efa manana Master.
Tsara izany no manantona ny Masoivohon'izy ireo mivantana, na mijery ny tranokalan'izy ireo, ahazoana ny andinindininy.
Fa ho an'ireo mihevitra ny hianto-tena kosa, raha France manokana no jerena, dia faran'ny taona volana desambra eo, ka hatramin'ny volana febroary, alohan'ny taom-pianarana no fisoratana anarana, na oniversité inscription fotsiny io, na mila manao sélection par dossier na concours.
lundi, 09 septembre 2019 15:37
Frantsa: 1 435 namoy ny ainy vokatry ny fidangan’ny hafanana
Niakatra avo dia avo ny hafanana tany Frantsa nandritra ny roa volana, jona sy jolay lasa teo iny. Nahatratra 42°C tao Paris renivohitra, tonga hatrany amin’ny 46°C izany tamin’ny faritra sasany, toy ny tany Hérault. Maro ny namoy ny ainy, tsy nahazaka ny fidangan’ny hafanana.
Nahatratra 1 435, ka 567 tamin’ny volana jona, ary 868 nandritra ny volana jolay.
lundi, 09 septembre 2019 15:30
Fitsidihana Papa Fransoa: Kopatanana fanaovam-beloma
lundi, 09 septembre 2019 15:29
Municipales à Mahajanga: Andriantomanga Mokhtar Salim candidat à sa propre succession
Andriantomanga Mokhtar Salim est le candidat de « Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina » aux prochaines municipales.
lundi, 09 septembre 2019 12:37
Akon’i Soamandrakizay: 248 ny marary nozahana sy notsaboina, 1 namoy ny ainy
Raha ny tarehimarika vonjimaika ny andron’ny 8 septambra 2019, nisian’ny lamesa lehibe teny Soamandrakizay, ivon’ny fitsidihana Apostolika nataon’i Papa Ray Masina teto Madagasikara dia nahatratra 248 ireo marary nozahana sy notsaboina tao amin'ny PMA (Poste Médical Avancé) teny an-toerana.
Tsy maintsy nampidirina hopitaly ny 15 tamin'ireo, nisy nalefa tao amin’ny HJRA Ampefiloha, ny sasany kosa tao amin’ny HJRB Befelatanana.
Nisy olona iray voan’ny sohika mahery (asthme suraigu) nindaosin’ny fahafatesana na teo aza ny ala nenina nataon’ny mpitsabo taminy.
Mafy ny asan’ny mpiasan’ny fahasalamana sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo teny Soamandrakizay ny sabotsy sy alahady noho ny vovoka tena nitorajofo.
lundi, 09 septembre 2019 12:35
Robert Mugabe: Hatao amin’ny 15 septambra 2019 ny fandevenana ny nofomangatsiakany
Ho tonga amin’ity herinandro ity ao Harare, renivohitr’i Zimbabwe ny nofomangatsiakan’i Robert Mugabe, filoha teo aloha, izay nodimandry ny 6 septambra 2019 tany Singapour, toerana nitsaboany tena.
Hotanterahina amin’ny 15 septambra 2019 ny fandevenana. Tsy mbola voafaritra mazava hatreto ny handevenana azy, na ao amin’ny « Champ des héros de la Nation » na any Zvimba tanindrazany.
Misaona ny any Zimbabwe nanomboka ny zoma teo, araka ny nambaran’i Emmerson Mnangagwa, filoha amperinasa.
Taorian’i Mozambika sy Madagasikara dia ny nosy Maorisy no hamaranan’i Papa Fransoa ny fitsidihana Apostolika faha-31 ataony.
Niainga ny maraina tetsy amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidin'ny kaompania Air Madagascar nitondra azy, ary hiverina eto Antananarivo anio hariva ihany.
1,3 tapitrisa eo ny mponina atsy Maorisy, izay manaraka ny finoana Hindoue ny 52%, Kristianina ny 30% ary Silamo ny 18%.